आप्रवासी परिवार रिकभरी कार्यक्रम
संघीय सहयोगबाट बाहिरिएका आप्रवासी परिवारहरूका लागि अगाडिको राम्रो बाटो - र राम्रो भविष्यको निर्माण।
पहिलो ग्यारेन्टी आय कार्यक्रम विशेष गरी आप्रवासी परिवारहरूका लागि डिजाइन गरिएको, वित्तीय सेवाहरू र स्रोतहरूसँग जोडिएको छ। चार जनाको आप्रवासी परिवारले संघीय भुक्तानीमा $11,400 गुमायो - पैसा जसले परिवारहरूलाई भाडा तिर्न र टेबलमा खाना राख्न मद्दत गर्न सक्छ।
कार्यक्रममा भर्ना भएका प्रत्येक परिवारले दुई वर्षसम्म प्रति महिना $400 पाउँछन्। परिवारहरूले यो प्रयोग गर्न सक्छन् जुन तिनीहरूले छनौट गरे पनि - कुनै स्ट्रिङ संलग्न छैन।
यसलाई पुनर्निर्माण गर्न नगद मात्रै भन्दा बढी लाग्नेछ: परिवारहरूले एक-बाट-एक वित्तीय कोचिङ, समूह शिक्षा, र स्व-वकालत प्रशिक्षणबाट छनौट गर्न सक्छन्।
परिवारहरू आफ्नै जीवनमा विशेषज्ञ हुन्। उनीहरूको यात्रा र अन्तरदृष्टिले क्षेत्रलाई सूचित गर्नेछ। उनीहरुको पुन: प्राप्तिले सकारात्मक परिवर्तनको चरण तय गर्नेछ।
इक्विटी फ्रन्ट र सेन्टरको साथ, आप्रवासी परिवार रिकभरी कार्यक्रमले संघीय सहायताबाट वञ्चित रहेका युवा बालबालिका भएका कम आय भएका आप्रवासी परिवारहरूमा केन्द्रित छ। यो सरल समाधान होइन: मानिसहरू जटिल जीवन बिताउँछन्। आप्रवासी परिवार रिकभरी कार्यक्रमले सबै परिवारहरूसँग पुन: निर्माण गर्नका लागि सान्दर्भिक उपकरण र स्रोतहरू छन् भनी सुनिश्चित गर्नको लागि उत्कृष्ट वित्त र प्रविधि ल्याउँछ।
आप्रवासी परिवार रिकभरी कार्यक्रममा भाग लिन को योग्य छ?
हामीले MAF बाट पहिले आप्रवासी परिवार अनुदान प्राप्त गरेका योग्य परिवारहरूलाई कार्यक्रममा आवेदन दिन निमन्त्रणाहरू पठाएर सुरु गर्दैछौं। हामी साना बच्चाहरू भएका आप्रवासी परिवारहरूलाई आमन्त्रित गर्दैछौं जसलाई संघीय राहतबाट बहिष्कृत गरिएको छ।
म कसरी आवेदन दिन सक्छु?
आमन्त्रितहरूले MAF को सुरक्षित पोर्टल मार्फत आवेदन कसरी पूरा गर्ने भन्ने चरणहरू सहितको इमेल प्राप्त गर्नेछन्।
म यो कार्यक्रमलाई कसरी समर्थन गर्न सक्छु?
तपाईंको योगदान सिधै मासिक ग्यारेन्टी आम्दानीमा जान्छ जुन परिवारको खल्तीमा जान्छ।
संघीय COVID-19 राहतबाट बहिष्कृत, आप्रवासी परिवारहरूले पुनर्निर्माणको लागि लामो बाटो सामना गर्नुपरेको छ। यसले हामी सबैलाई - कार्यकर्ता, नीति निर्माता, साझेदार, परोपकारी, र साथीहरूको रूपमा - देखाउने, धेरै गर्न, र सबै परिवारहरूको लागि पुन: प्राप्ति सुनिश्चित गर्न अझ राम्रो गर्न लाग्नेछ।
रिकभरीलाई समर्थन गर्नुहोस्
हामी आप्रवासी परिवारहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्न हामीले सहन गर्नुपर्ने सबै ल्याउँदैछौं । तर हामी एक्लै गर्न सक्दैनौं। हामीसँग सामेल हुनुहोस् र आर्थिक सुधारको बाटोमा रहेका परिवारहरूलाई सहयोग गर्न आज दान गर्नुहोस् ।
हाम्रो राष्ट्रको सामाजिक सुरक्षा नेटले धेरै घरपरिवारहरूलाई COVID-19 बाँच्न मद्दत गर्यो, तर लाखौं आप्रवासी परिवारहरूलाई बहिष्कृत गरियो। सबै परिवारका लागि आर्थिक पुन:प्राप्तिको लागि ग्यारेन्टी गरिएको आय किन आवश्यक छ भन्ने कुरा जान्नुहोस्।
साँचो साझेदारीमा, कार्यक्रममा रहेका परिवारहरूले पुन: निर्माण गर्दा आफ्ना कथाहरू र रणनीतिहरू साझा गरिरहेका छन्। परिवारहरूबाट सुन्न साइन अप गर्नुहोस् र रिकभरीको बाटोमा के काम गरिरहेको छ भन्ने बारे वास्तविक-समय अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुहोस्।
आप्रवासी परिवार रिकभरी कार्यक्रम समर्थकहरू
सबै परिवारहरूको लागि रिकभरी सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नु भएकोमा हाम्रा साझेदारहरूलाई धन्यवाद।